Times24 Nepal » जीवनशैली
आफ्नो बोली’बाटै करोडौं दर्शक तथा स्रोताको मन जितेका रमेश प्रसाइ भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छ्न । उनले काली:कोट महाबै गाउँपालिका-४ की नन्दा सिंहसँग लग’नगाँठो कसेका हुन् । रमेश र नन्दाको विवाह समारोह धरान नगरपा’लिका-१ स्थित उद्योग बाणिज्य संघको पार्टी प्याले’समा भएको थियो । बिवाह समारोहमा दुबै तर्फका.....
मन हुदाहुदै पनि किन यौ न सम्पर्कका लागि ‘नो’ भन्छन् महिलाहरु ?
एजेन्सी । यौ न सम्पर्क गर्ने अवसर छाड्दा मानिसलाई कस्तो महसुस हुन्छ। नयाँ अनुसन्धानको नतिजा हेर्ने हो भने पुरुष र महिलाबीच यहाँ ठुलो खाडल देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा केही महिलाले मात्रै यौ न का लागि ‘हुन्‍न’ भनेकोमा आफुलाई पछुतो लागेको बताएका छन् । पछुतो गर्ने पुरुषहरुको संख्या भने ठुलो छ। उनीहरुले.....
नवलपुर । नवलपुर माईती भएकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज मंगलवार २७ जना नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै नवलपरासीका थप एक जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो ।नवलपरासी २ जिल्लामा बिभाजन भएपछि बनेका पुर्बी र पश्चिमी जिल्ला मध्ये संक्रमित कुन जिल्लाको हो भनेर.....
सुन्दै अचम्म लागने एक वर्षमा २२ जना पुरुषले जन्माए बच्चा पुरा पढ्नुहोस
महिला गर्भवती हुनु र बच्चा जन्माउनु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर, अष्ट्रेलियामा भने एक वर्षमा २२ जना पुरुष सुत्केरी भएका छन् । अष्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिसले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २२ जना पुरुष गर्भवती बने र बच्चासमेत जन्माए ।अष्ट्रेलियामा त्यसरी बच्चा जन्माउने पुरुषहरु स’मलिं’गी.....
भिडियो / शारी’रिक सम्प’र्क गर्दा स्त’न मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह
शारी’रिक स’म्पर्क गर्ने क्रमलाई आनन्द’मय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् । शा’रीरिक सम्प’र्कका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्त’न मिच्ने समेत गर्छन् । शारी’रिक सम्प’र्कअघि शारी’रिक उत्ते’जना बढाउन स्त’न मिच्ने गरेपनि शा’रीरिक स’म्पर्कका क्रममा स्त’न मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जान’कारी नहुन.....
यस्तो नि हुन्छ नेपालमा / हेर्नुहोस।
लकडाउनपछि लुम्बिनीमा पर्यटकको चहलपल शून्य भैरहवा, २४ चैत । पर्यटकको मुख्य आकर्षण केन्द्र मानिने लुम्बिनीमा लकडाउनपछि पर्यटकको चहलपल शून्यप्रायः भएको छ । यहाँका मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, शान्ति स्तूपा, सेन्टर क्यानल, ग्रेट लोटस स्तुपा विभिन्न देशका नामका स्तुपालगायत क्षेत्रहरु अहिले सुनसान भएको.....
डडेलधुरामा स्वास्थसेवा दिदै डा.गोविन्द केसी, बिरामी भन्छन- यस्ता पो डाक्टर !
काठमाडौं, अर्थोपेडीक सर्जन तथा समाजसेवी डा गोविन्द केसी तीन साताअघि देखि स्वास्थ्य सेवा दिन डडेलधुरा अस्पताल पुगेका छन्। डा केसी डडेलधुरा पुगेर काम गरेपछि त्यहाँको वातावरणमा फरकपन आएको त्यहॉका चिकित्सक, बिरामी र उनीहरुका आफन्तहरुले बताउन थालेका छन्। ‘डाक्टर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धेरै कुरा डा केसीबाट.....
मंसिर ६, २०७६ शुक्रबार काठमान्डौ , तपाईंलाई आँखै अगाडि सगरमाथा हेर्ने रहर छ ? लामो हिमाली पदयात्रा, महँगी, समय अभाव जस्ता समस्याले सगरमाथा हेर्ने रहर पूरा भएको छैन भने तपाईंको लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनुसक्छ, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गाका सीमानामा रहेको पत्ताले डाँडा । पत्ताले डाँडा समुन्द्री सतहबाट झण्डै ३२.....
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट हटाइएपछि लालबाबु पण्डित मन्त्री निवासबाट बाहिर डेरा खोज्दै छन् । मन्त्रीबाट हटेपछि एक दिन पनि सरकारी निवासमा बस्न नरुचाउने पण्डितले बिहीबार बिहानैदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद सचिवालय नजिकै डेरा खोजिरहेका छन् । ‘आफूसँग सवारी साधन नभएकाले हिँडेर.....
भगवान गौतम बुद्ध इसा पूर्व ५६३ को छैठौं शताब्दीमा जन्मिएका थिए भने ८० वर्षको उमेर अर्थात इसा पूर्व ४८३ मा उनको निधन भयो । उनी एक अन्तरज्ञानी र गुरु थिए । उनले नै बुद्ध धर्मको जग बसालेका हुन् । आज हामीले तिनै महान बुद्धका केही भनाईहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन भनाईं तपाईंको लागि जीवन उपयोगी बन्न सक्छन् । – सूर्य,.....